Dhalinyarada Merka oo cabasha muujineysa | KEYDMEDIA ENGLISH
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Merka oo ay la hadashay Keydmedia ayaa waxa ay sheegeen in ay aad u adagtahay gudaha magaaladaasi in ay ku noolaadaan dhalinyaro aan ku lug laheyn falalka kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee taliya magaaladaasi.
“Waxyaabaha aan sida weyn u dhibsanay waxaa ka mid ah, in xittaa gurigaaga aadan si xor ah ugu noolaan Karin, waa la soo galayaa waa lagu baarayaa isla markaana xiliyadda qaar waxaa faraha lala galayaa arimahaaga gaarka ah” sidaa waxaa yiri Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladaasi.
“ Waxaan guriga ku isticmaali jiray Dhalo iyo kaaseet (Caste ) aan ku daawan jiray aflaan kale duwan, saaxibkey oo guriga igula noolaa ayaa ku biiray kooxaha ka taliya halkaasi, waxaana uu todobaad kadib markii uu ku biiray kooxdaasi iigu yimid guriga isla markaana igu war galiyay in aan ahay danbiile” sidaa waxaa yiri Aweys oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Merka.
Dhalinyaradan ayaa si isku mid ah waxa ay u sheegeen in ay nolasha magaalada Merka ay isu adkaaneysa maalinba maalinta ka danbeysa, waxaana ay qireen dhalinyaradan haddii aanu isbadal deg deg ah dhicin in dhibaatada ay sii badan doonto.
Marka laga soo tago magaalada Merko ee xarunta gobalka Sh/hoose ayaa hadana waxaa qeyla dhaan tan la mid ah waxa ay guud ahaan ka soo yeereysaa gobaladda ay ka taliyaan xoogaga mucaaradka ee la dagaalama dowladda KMG ah Soomaaliya.